May Nyane: July 2015
အမေရိကားမှာ ဘာအတွက် ပညာသင်ကြသလဲ…. (နောက်ဆက်တွဲ)
မနေ့က ကျမ သားသမီးတွေရဲ့ အခြေနေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အမေရိကမှာ ပညာသင်တဲ့ပုံစံ တစိတ်တပိုင်းလေးကို ရေးခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီစာကိုဖတ်ပြီး ပီတိဖြစ်တဲ့ ညီမတစ်ယောက် က ကျမကို လှမ်းပြောပါတယ်.. ကျမ သားသမီးတွေအတွက် ၀မ်းသာကြောင်း နဲ့ မြန်မာပြည်က ကံမကောင်းရှာကြတဲ့ ကလေးတွေ လူငယ်တွေအတွက် ၀မ်းနည်း စိတ်ထိခိုက်လို့ ခဏခဏ မျက်ရည်ကျရကြောင်း..။ သူ နဲ့ ကျမက အတော် ခံစားချက်တူပါတယ်..။ မတူတာက သူက ပြည်ပနိုင်ငံကြီး တစ်ခုမှာ နေခွင့်ရတာတောင် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲ နေမှာလို့ ရွေးခဲ့သူပါ..။ ကျမ သူ့ကို ပြောဖူးပါတယ်..။ အစ်မကတော့ ညီမလို မလုပ်နိုင်ဘူးကွယ်.. ညီမလေးကို တကယ် ချီးကျူးပါတယ်.. သားလေးပညာရေး အဆင်ပြေရင်တော့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ နေနိုင်တာ ကောင်းပါတယ်… လို့။
တကယ်လည်း အခြေအနေတိုင်းမှာ အယူအဆတွေ အမြင်တွေ ခံယူချက်တွေက အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမြဲတမ်း အမှန်အမှား နှစ်မျိုးတည်း ရှိတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အယူအဆတိုင်းဟာလည်း သူ့ရှုထောင့် နဲ့ သူ မှန်နေတတ် ကြပါတယ်။
ကျမ က အပေါင်းအသင်း အလွန်များပြီး ကျမဘ၀ ပုံစံ နဲ့ ကျမရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကလည်း သူများနဲ့ သိပ်မတူတာကြောင့် (ပြောရရင် မြန်မာအမြင်နဲ့ တော်တော် သဟဇာတ မဖြစ်တာကြောင့်) ကျမ သားသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျမ အပေါင်းအသင်း တွေက ပူပန်ကြ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမ သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးအကြောင်း မကြာခဏ မေးလေ့ရှိ ပါတယ်။ ကျမ ပြည်ပကို ထွက်လာကတည်းက သားသမီးပညာရေးအတွက်လို့ ပြောပြီး ထွက်လာခဲ့တာကြောင့် လည်း သူတို့က သိချင်ကြတာ ပါပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျမက ပညာရေးနယ်ထဲ အစဉ်တစိုက် နေလာပြီး ပညာရေးအကြောင်းတွေ ရေးလေ့ ရှိသူမို့ အမေရီကန် ပညာရေးအကြောင်း ရေးပါလို့ တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ တနေ့တော့ ရေးပါဦးမယ် လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျမ သူငယ်ချင်းတွေ သိချင်တဲ့အထဲမှာ DV (Diversity Visa Lottery) အကြောင်းလည်း ပါပါတယ်။ ကိုရာကျော် DV ပေါက်လို့ ကျမတို့ အမေရီက ရောက်တာမို့ ကျမ အဲဒီ Program အကြောင်းလည်း ရေးပါဦးမယ်)
ပြောရရင် အမေရီကန် ပညာရေးအကြောင်း ကျမ တော်တော် မသိပါဘူး..။ အမေရိကန်မှာက ပြည်နယ်အလိုက် မူဝါဒတွေ ကွဲ.. သင်ရိုးတွေ.. ပြဋ္ဌာန်းစာတွေ ကွဲတာကြောင့် တခုခု ကို သတ်မှတ်ပြီး ရေးပြဖို့ ခက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမေရီကန် ကျောင်းတိုင်းလည်း ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်သိတဲ့ ကိုယ့်သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးအကြောင်းပြောရင်း တစိတ်တပိုင်းလောက်ကိုပဲ ထိ တို့ ပြနိုင်တာပါ။ ပြီးတော့ ကျမ သား သမီးတွေ နေတဲ့ ကျောင်းကလည်း သိပ် အကောင်းစား ကျောင်းကြီး မဟုတ်ပါဘူး..။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ လူလတ်တန်းစား တွေအတွက်တော့ သူ့အိုး နဲ့ သူ့ဆန် တန်တဲ့ အနေအထားပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျမအတွက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပညာရေးစနစ်ကို သည်းမခံနိုင်တော့လွန်းလို့ ပြည်ပ ထွက် လာသူမို့ ဒီလောက်ကလေးရတာကိုပဲ ရလှပြီလို့ အောက်မေ့ပါတယ်။
ကျမ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက တက္ကသိုလ် ကထိက ဘ၀ မှာ .. အိမ်ထောင်ဦးစီးက နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်တာတောင် သားသမီးတွေ နဲ့ နေရေး စားရေး ပညာရေး ဘယ်လောက် ပူပန် ဆင်းရဲခဲ့ရသလဲ..။ အဆင်းရဲခံပြီး နှစ် ၂၀ နီးပါး ဆရာမ ဘ၀ ရုန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ အကျိုး အမြတ် က ဘာလဲ…။ ကျမ ခဏခဏ ရေးဖူးပါတယ်..။ ဆရာ ဆရာမတွေက အဆင်းရဲခံ ပြီး ပညာရေးအတွက် အလုပ်လုပ်လို့ သိပ်တော်တဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ မွေးထုတ်နိုင်သလား..၊ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး ကိုယ့်သားသမီးတွေ ဆရာ ဆရာမ သားသမီးမို့လို့ မပူမပင်နဲ့ ပညာသင်နိုင်သလား….။ ကျမတို့ ဘ၀တွေ သိပ်ဆိုးခဲ့ပါတယ်..။ ပစ္စပ္ပန် ဆိုးတာဟာ အတိတ်ဆိုးတာ.. အနာဂတ်ဆိုးတာပဲမို့လို့ အဲဒီတုန်းက ပစ္စပ္ပန် ကို ကျမ မခံစား နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ကျမ ကလေးပညာရေးအတွက် အပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ ကျမ အင်မတန် ချစ်ခင် လေးစားတဲ့ နာမည်ကျော် ကာတွန်းဆရာတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်..။ “ကျနော်တော့ မထွက်ဘူး.. ကျနော့် သားသမီးလည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်က တခြား ကလေးတွေ နဲ့ တူတူ ရင်ဆိုင်ရမှာပဲ .. ကျနော်တို့က ဒီတိုင်းပြည်ကကိုး.. “တဲ့။ ကျမ သူ့ရှေ့မှာ မျက်ရည်ကျခဲ့ ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို ပြောခဲ့ပါတယ်..။ ကျမ ကတော့ မိဘတွေက ကြိုးစားပေးပါလျက်နဲ့ .. ကလေးတွေကလည်း တော်ပါလျက် နဲ့ ခေတ်စနစ်ကြောင့်.. မညီမျှတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကြောင့် မနစ်မွန်းသင့်ဘဲ နစ်မွန်းပြီး အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ ဘ၀မျိုးထဲမှာ ကျမ သားသမီးတွေကို မထားနိုင်တော့ဘူး .. ကျမ မှာ အချိန် သိပ် မရှိတော့ဘူး လို့ သူ့ကို ပြန်ပြော ခဲ့ပါတယ်။” ကျမ တက္ကသိုလ်ဆရာမ ၁၉ နှစ် လုပ်ခဲ့တာမှာ လူငယ်တွေ မညံ့တာ .. စနစ်ကြောင့် ပျက်စီးရတာ.. စနစ် ဘယ်လောက် ဆိုးတယ်ဆိုတာတွေ ကောင်းကောင်း သိခဲ့တာကြောင့်လည်း ကျမလို ပါချီပါချဲ့ ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက် က ဒါကို ပြောင်းအောင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ ကိုလည်း ကောင်းကောင်း သိခဲ့ပါတယ်။ အရာရာ ပိုက်ဆံ ကသာ ဦးဆောင်ဖြေရှင်းသွားတဲ့ လောကမှာ ကျမ ဘာမှ မဖြေရှင်းနိုင်တာ သေချာခဲ့ပါတယ်။ ကျမ အဓိက ပြောချင်တာ အဲဒါပါပဲ။
ခု အမေရိကားမှာ ကျမတို့က အလုပ်လက်မဲ့.. လစာနည်း အခြေခံ လူတန်းစားထက် နည်းနည်းလေးပဲ ပိုသာတဲ့ ဘ၀မှာ ကျမ သားသမီးတွေဟာ ကြိုးစားမှု တစ်ခုတည်းနဲ့ အရာရောက်နိုင်တယ် .. လူ့ဘ၀မှာ ကိုယ်လုပ်ရင် ရတယ်.. ဆိုတဲ့ အသိ နဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ကြီးပြင်းရတယ်..။ ကိုယ် ညံ့ရင် ခံရမှာပဲ ဆိုတာကို သိခွင့်ရတယ်။ ကျမ မျှော်လင့်တာ.. ကျမ တတ်နိုင် တာက ဒီလောက်ပဲ မို့ ဒါက ကျမတို့အတွက် လုံလောက်ပြီ..။ အမေရိကမှာလည်း ငွေကြေး တတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင် သလောက် ပိုကောင်းတဲ့ ပညာရေး.. ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ ပညာရေး .. ပိုကောင်းတဲ့ ကျောင်းတွေ တက်နိုင်တာပေါ့..။ အဲလို ကွဲပြားမှု ရှိတာပေါ့..။ ဒါပေမဲ့ ကြိုးစားသူတွေအတွက် အခွင့်အရေးဆိုတာလည်း ရှိနေပါတယ်။ ကျမ မြန်မာပြည်မှာ နေ တုန်း က ကျမက တက္ကသိုလ်က ကထိက ဆရာမ ဖြစ်နေတာတောင် ပိုက်ဆံ မချမ်းသာတာကြောင့် ကျမသားကြီးဟာ TTC ကျောင်းမှာ ဆရာမ တချို့ နဲ့ အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းတချို့ ရဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ စနစ် ပြဿနာပါ…။ အမေရိကားမှာကတော့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု (Discrimination) လို့ သေချာရင်ကို သိသိသာသာ အရေးယူ ခံရ မယ့် စနစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ ဆရာ မိဘ အစည်းအဝေးရှိရင်တောင် မှန်မှန် မတက်နိုင်တဲ့.. အစည်းအဝေးမှာ ဝေဖန် အကြံပေးတာတောင် သေချာ မလုပ်နိုင်တဲ့ ကျမတို့လို မိဘမျိုးတွေရဲ့ သားသမီးတွေဟာ သူတို့ ကြိုးစားမှု နဲ့ ရပ်တည် အောင်မြင်နိုင်ကြတာပါ..။ ကျမ ကလေး တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုဆိုတာက အမေရိကရောက် ကြိုးစားတဲ့ ပညာတတ် မြန်မာ မိသားစု ၉၀% မှာ ရှိတဲ့ အောင်မြင်မှုပါ။ မြန်မာပြည် ကနေ စောစောရောက်လာပြီး ပညာရေးကို ဆက်လုပ်လို့ ဒီမှာ ဘွဲ့ရပြီး အဆင့်မြင့်ရာထူးတွေ လစာ ကောင်းကောင်းတွေ ရနေကြတဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေလည်း ကျမ ပတ်ဝန်းကျင် မှာ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်..။ အဲဒီ မိသားစုတွေက ကလေးတွေဆိုရင် အခြေခံ အထက်တန်းပညာရေး အဆင့်မှာတောင် ကျောင်း ကောင်းကောင်း နေခွင့်ရပြီး အဆင့်မြင့် ပညာရေး တွေ ချဲ့ထွင်နိုင်ကြလို့ ဘယ်လောက်တော်ကြ.. ဘယ်လောက် ထူးချွန်ကြ.. ဘယ်လောက် အောင်မြင်ကြတယ်ဆိုတာ .. ကျမတောင် ရေးမပြတတ်ပါဘူး..။ သူတို့ရဲ့ ပညာရေးရလဒ် တွေက ခက်ခဲနက်နဲပြီး ကျမအတွက်တော့ ရှုပ်လည်း ရှုပ်ထွေး လို့ပါ..။ ခု ဒါတွေကို ရေးပြနေတာကလည်း ပညာရေးစနစ်က ဘယ်လောက် အရေးပါတယ်ဆိုတာကို ပေါ်လွင်စေချင် လို့ ပါပဲ။
နောက် အဓိက ကျတာ တစ်ခုကတော့ သူတို့ ပညာတော်တာ ဘာအတွက်လဲ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။
အမေရိကရောက် မြန်မာမိသားစု အများစုဟာ အမေရိကမှာ နေပေမဲ့ မြန်မာပြည်အရေးကိုပဲ စိတ်ထဲ ထားကြပါတယ်..။ ဒါကြောင့် ကျမတို့ မကြာခဏ ပြောဖြစ်ကြတာက အမေရိကန်အစိုးရအတွက် တော်တော် မတရားဘူးနော်.. လို့ ရယ်စရာ လို ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျမတို့က သူတို့နိုင်ငံမှာ နေပြီး.. သူတို့ ပေးသမျှ အခွင့်အရေးတွေကို တန်းတူ ခံစားပြီး သားသမီး တွေ ပညာတတ်တဲ့အခါ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က အခွင့်အရေးပေးရင် (ကိုယ့်တိုင်းပြည်က လက်ခံ ကြိုဆို ရင်) ကိုယ့် တိုင်းပြည်မှာ ပြန်အလုပ်လုပ်ရမယ်.. ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အမေရီကရောက် ပညာတတ် မြန်မာမိဘ ၈၀% လောက် မှာ ရှိပါတယ်။ အများစုက တက္ကသိုလ်မှာ ဘာသာရပ်ရွေးရင်တောင် မြန်မာပြည်မှာ ဒီဘာသာနဲ့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို ထည့်စဉ်းစားကြပါတယ်..။ ကျမထင်ပါတယ်.. မြန်မာပြည်တကယ်လင်းပွင့်တဲ့အခါ… မြန်မာနွယ်ဖွား အမေရိကန် လူငယ် တွေ အများကြီး မြန်မာပြည် ပြန်လည် ထူထောင်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ပြန်လာ အလုပ်လုပ်ကြမှာပါ..။ မြန်မာပြည်က တကယ်တမ်း နွေးနွေးထွေးထွေး လက်ခံကြိုဆိုဖို့တော့ လိုတာပေါ့လေ..။
ကျမ .. ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို စွန့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်က တဘက် .. ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်းဆိုတဲ့ စကားပုံကို ဖျက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်က တဘက် နဲ့ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ရှိပါတယ်..။ ဖတ်ဖူးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ…
ဒါနဲ့ပဲ.. ငြိမ်ငြိမ်လေး ကုပ်ကွေးနေရ..
ဒီချောင်ကိုလည်း မခွာရက်နိုင်ဘူးတဲ့လေ.. သူက။
မှောင်ထဲမှာ မျက်လုံးတွေ လက်ပသူ ကျမက
ချောင်ထဲက အပူကိုတော့ မုန်းတယ်..။
at July 21, 20156comments:
အမေရိကားမှာ ဘာအတွက် ပညာသင်ကြသလဲ….
သားကြီး အမေရိကား ကိုရောက်တော့ အသက် ၁၇ နှစ်..။ ဗမာပြည်ကနေ အသက် ၁၄နှစ် မပြည့်ခင် ၈ တန်းအောင် အဆင့် နဲ့ ပြည်ပ ထွက်လာရပြီး ဘာအောင်လက်မှတ်မှ မရှိ..။ ဇင်းမယ်မှာ နေတုန်းက BC မှာ English တက်ထားတာနဲ့ မဲဆောက်မှာ GED Preparation Course ၂ နှစ် တက်ထားတာပဲ ရှိတဲ့ သားကြီးက အမေရိကားရောက်တော့ ဒီက အထက်တန်းကျောင်းကို ဝင်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ အဲဒီမှာ Counselor က သူ့ရဲ့ အသက် နဲ့ English နဲ့ General Knowledge ကို အကဲခတ်ပြီး ကောလိပ်ဝင်ခွင့် ကြိုးစား ကြည့်ဖို့ ပြောရာက သားကြီး ကောလိပ် တန်းတက်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်း ကျမ ရေးဖူးပါတယ်။
အမေရိကားကိုရောက်စ ရွှေ့ပြောင်းမိသားစုအနေနဲ့ အခြေခံလူတန်းစားအဆင့်သာ ၀င်တဲ့ အတွက်ရော.. ကောလိပ်ဝင်ခွင့်မှာ သားကြီးရဲ့ ရမှတ် ကောင်းတာကြောင့်ရော.. ကောလိပ် တက်ဖို့ အစိုးရဆီက ထောက်ပံ့ကြေး လုံလုံလောက်လောက် ရခဲ့တာမို့ သူတကာတွေ တစ်နှစ်ကို သောင်းချီ ကုန်တဲ့ ကောလိပ်မှာ သားအတွက် ကျမတို့ တစ်ဒေါ်လာတောင် မကုန်လိုက်ရဘဲ သားကြီး Associate Degree ရသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကောလိပ်တက် ကတည်း က သားကြီးက အချိန်ပိုင်းအလုပ်တစ်ဘက်နဲ့ ရမှတ်တွေလည်း အဆင့်မကျအောင် ကြိုးစားရတာတော့ ရှိတာ ပေါ့။ ဒါမှ ထောက်ပံ့ကြေး မပြုတ်မှာလေ။
အဲဒီအချိန်မှာ သမီး နဲ့ သားငယ် က မူလတန်းကနေ စနေကြရပြီး ကံအကောင်းဆုံးကတော့ သူငယ်တန်း ကနေ စတက် ခွင့်ရတဲ့ သားငယ်ပေါ့။ သမီးလေးက ၃တန်းနဲ့ စရပါတယ်။ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က အင်္ဂလိပ်စာ ခနော်နီ ခနော်နဲ့မို့ ကျမရဲ့ သားသမီးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ပဲ ပို အားကိုးပြီး ကြိုးစားကြရတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ သမီး ၅တန်းအပြီး မူလတန်းအောင် ကျောင်းဆင်းတာ မှာ သမ္မတ အိုဘားမား လက်မှတ် နဲ့ Presidential Award ရတော့ ကျမ တော်တော် ပီတိ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆုရတဲ့ ကလေးကို Honor Roll အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ (တကယ်တော့ မြန်မာကလေး အတော်များများလည်း ရဖူးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်သမီးလေး.. မိဘတွေ သိပ် မကူနိုင် တဲ့ ကြားက ရတာမို့ ကျမ ပီတိ ဖြစ်တာပါပဲ) ။
နောက်တော့ သားလေး အလှည့်…။ သူ့အစ်ကိုကြီးရော.. အစ်မရော က ထူးချွန်ဆုတွေ ရတဲ့ အစဉ်အလာ ရှိထားတော့ သူ့ခမျာ မူလတန်းကျောင်းဆင်းပွဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ Presidential Award က ကြိုသိမထားရဘဲ ပေးတာမို့ စိတ်တပူပူ ရင် တခုန်ခုန်ပေါ့..။ တော်ပါသေးတယ်.. သားငယ်လေးလည်း သူ့အစ်မ ခြေရာ နင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သားငယ် အလှည့် မှာတော့ မူလတန်းအဆင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး စာစီစာကုံးအဖြစ် အရွေးခံရလို့ သူ့စာစီစာကုံးကို အဲဒီ ကျောင်းဆင်းပွဲ မှာ ဖတ်ပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ပြောပြချင်တာက အဲဒီလို ကလေးတွေရဲ့ ထူးချွန်မှုတွေဟာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ်သွားတဲ့ Assessment စနစ် နဲ့ ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အပြင် ကလေးရဲ့ ဘ၀တလျှောက်လုံးအထိ သယ်သွားတဲ့ Record တွေ Credit တွေလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ သားကြီး က ကောလိပ်ဘွဲ့ပြီးလို့ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့အတွက် ဆက်တက်ဖို့ ပြင်ပါတယ်။ သားကြီးက Economics ဘာသာနဲ့ ဘွဲ့ထပ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အဲလိုဆုံးဖြတ်ဖို့ သူ့အနားက အဒေါ်တွေ ဦးလေးတွေ ၀ိုင်းစဉ်းစားကြ.. အကြံ ပေးကြ.. ပေါ့။ တကယ်တော့ သားကြီးက Economics ကို လုံးဝ ၀ါသနာမပါခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အလုပ် ကောင်းကောင်း ရဖို့နဲ့ သူ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလောက်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိတဲ့ပညာရပ်လို့ ထင်တာကြောင့် ရွေးလိုက်တာပါ။ တကယ်လည်း ခုတော့ သူ စိတ်ဝင်စားနေပုံပါပဲ။ ကျမ အမြင်တော့ အမေရိကားရဲ့ ပညာရေးစနစ်ဟာ တကယ် ပညာလိုချင်သူတွေ ကြိုးစားချင်သူတွေကို တော်တော် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ပညာရပ်တွေ.. သင်ကြားနည်းစနစ်တွေ.. မက်လုံးတွေ နဲ့ ဖွဲ့စည်း ထား တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ကျမကိုယ်တိုင် ကောလိပ်မှာ American English အတွက် ၂ နှစ် တက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ တာ မို့ လည်း ခုလို ပြောဖြစ်တာပါ။
သမီး အထက်တန်းကျောင်းတက်ရတော့မယ့်အချိန်မှာ အထက်တန်းအဆင့်မှာ သင်ရမယ့် ဘာသာတွဲတွေကို ကိုယ့် စိတ်ကြိုက်ရွေးရပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ အခြေခံရွေးတာက အထက်တန်းအပြီး တက္ကသိုလ်မှာ ကိုယ် ဘာ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းဘာသာရပ်ကို လိုချင်တာလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် အခြေခံ စဉ်းစားရပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကျမကို သမီးက တိုင်ပင်တဲ့အခါ ကျမ ပြန်ပြောတဲ့စကားက သမီးကြိုက်တာသာယူ.. ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဘာသာယူရင် သမီး သွားချင်တဲ့ လိုင်းနဲ့ အံဝင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သေချာ စဉ်းစားရပါတော့မယ်။ အဲဒီအခါ ကျမ သမီး မှာ သွေးမတော် သားမစပ်ဘဲ သူအားကိုးတဲ့ ယုံတဲ့ .. သူ့ကို အကြံပေးနေကျ အဒေါ်တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီအဒေါ်ကို သူ တိုင်ပင် ပါတယ်။ အဲလို တိုင်ပင်ပြီး ဘာသာရပ်တွေ ရွေးလိုက်ပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ သမီးဟာ သူကြိုက်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေ နဲ့ အထက်တန်းပညာရေးမှာ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ပဲ Honor Roll မှာ Advanced Courses တွေကိုပါ ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Advanced Course အကြောင်း နည်းနည်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ကလေးက စာ လိုက်နိုင်တယ်.. စာပိုသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုရင် သူ နိုင်သလောက် စာသင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Honor Roll ရတဲ့ ကလေးတွေဟာ ဘာသာရပ်တွေကို အဆင့်မြှင့်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမီးက ၇တန်း မှာ ကတည်းက ၈တန်းအဆင့် Math , Science လိုမျိုးတွေ မြှင့်ယူနေပါပြီ။ ခု ၉တန်းမှာလည်း ၁၁တန်းအဆင့် ထိတောင် ဘာသာရပ်တချို့ကို ယူနေပါပြီ။ အဲဒီ အကျိုး ဆက် ကတော့ အထက်တန်းအဆင့် ၁၁တန်း ၁၂တန်းလောက်မှာ ကောလိပ်လောက်အဆင့် ဘာသာရပ်တွေ ယူလိုက် ရတာမို့ ကောလိပ်မှာ ဘာသာရပ်နည်းနည်းကို အချိ်န်တိုတို နဲ့ ပြီးသွားပြီး တက္ကသိုလ် မြန်မြန်ရောက်.. ဘွဲ့မြန်မြန်ရတာမို့ အချိန်ကုန်.. ပိုက်ဆံကုန် သက်သာသွားပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းမှာက အဲဒီဘာသာရပ်တွေကို အလကား သင်ရ တာ မို့လို့ပါပဲ။
သမီးက ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ Lawyer တဲ့ .. Lawyer တောင်မှ Criminal Lawyer တဲ့။ ပြီးတော့ စစ်တပ် ရဲ့ Criminal Case တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Lawyer ဖြစ်ချင်တာတဲ့။ ကျမဖြင့် အံ့သြတာပဲ..။ သမီးက အစ်ကို နဲ့ မောင်ကြား နေရလို့လားမသိပါဘူး.. ယောကျာ်းဆန်ဆန် လှုပ်ရှားပုံမျိုး ရှိတယ်..။ သူကြိုက်တဲ့ အားကစားတွေကလည်း Softball, Basketball ပြီးတော့ တာဝေးပြေး.. စက်ဘီးအပြိုင်စီး..Kick Boxing.. ဒီလိုနဲ့ တနေ့တော့ အဖေ နဲ့ အမေကို ပြောတယ်.. သူဖြစ်ချင်တဲ့ Criminal Lawyer ဖြစ်ဖို့ Credit ရအောင် County Police Department မှာ Volunteer လုပ်ဖို့ လျှောက်ချင် တယ်တဲ့။ ကျမ မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်တော့ အဲလို လုပ်ခွင့်ရဖို့ ခက်တယ်တဲ့.. ဒါပေမဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပေါ့ တဲ့။ သမီး က သူ့ ဘာသာ application form တွေသွားယူလာ.. ဖြည့်.. ကျမတို့ မိဘ လက်မှတ်ထိုး တင်..။ နောက်တော့ လူတွေ့စစ်.. ကျောင်းက ရမှတ်တွေ အကဲဖြတ်အဆင့်တွေ စစ်.. ကျန်းမာရေး စစ်.. သက်လုံ စစ်..။ သူ့အဖေခမျာ သူ့သမီးသွားသမျှ လိုက်ပို့ရတာ အမောပေါ့..။
နောက်တော့ အရွေးခံရတယ်တဲ့။ ကျောင်းက ညနေ ၅နာရီ ပြန်ရောက်တဲ့ သမီးက ၆ နာရီမှာ ရဲစခန်း သွားရတာ.. သူ့အဖေ ခမျာလည်း ၅နာရီ အိမ်ပြန်ရောက်.. ညနေစာပြင်ပြီး သမီး ကို လိုက်ပို့.. ပြန်ကြို…။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး…။ ဘယ်လောက် ပင်ပန်းသလဲ ပြောမပြတတ်တော့။ နောက်တော့ သမီး Selection အရွေးခံရတယ်.. အထူးသင်တန်း တက်ရမယ်… နောက်ဆုံး သူ့အဖေက ကျဲကျဲ ရယ်.. သမီး လုပ်နေ တာတွေ အများကြီး.. ဘဘ မောနေပြီ လို့တောင် ပြောယူရရော..။ နောက်မှ ကျမ သိတယ်.. သမီး အဲလို အရွေးခံရဖို့ Maryland ပြည်နယ်ထဲက .. County တွေ အများကြီးထဲက .. အထက်တန်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသား အများကြီး ထဲက.. Honor Roll တွေ အများကြီးထဲက.. Volunteer လူငယ်အများကြီးထဲကနေ အပြိုင် အရွေးခံရတာ တဲ့။ အရွေးခံရတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့…. သမီး ကောလိပ်တက်ရင် .. သမီးကြိုက်တဲ့ Law School တက်ရင်.. Scholarship ရမှာ.. မေမေတို့ ဘဘတို့ ပိုက်ဆံ သိပ် မကုန်တော့ဘူးပေါ့တဲ့။
ခုတော့ ၁၅နှစ်မ .. ၁၀တန်းကျောင်းသူက စေတနာ့ ၀န်ထမ်း ရဲမေ တဲ့။ သူက ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ရှေ့နေ လုပ်ဦးမှာတဲ့။ အဲဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေခံပညာရေး လိုအပ်ချက် ကို အထက်တန်းကျောင်း ကတည်း ကနေ စပြီး ကျောင်းကနေရော.. ကျောင်း ပြင်ပ ပညာရေးကပါ တည်ဆောက်သွား ရ တာ တဲ့။ (တကယ်လို့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကောလိပ် မတက် ဖြစ် တော့တဲ့ လူငယ်တွေတောင် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အဖြစ် ရဲ အလုပ်ကို ရွေးဖို့ လှေကားတစ်ထစ်လည်း ဖြစ်နိုင် ပါသေးတယ်)။
ဒီနေ့ သင်တန်းဆင်းပွဲအပြီးမှာ သမီးက ပြောပါတယ်.. ပင်ပန်းလိုက်တာ မေမေရာ.. တဲ့။ တကယ့်ရဲတွေ.. စစ်သားတွေ လုပ်သလို သမီးတို့ကို အကြမ်းကိုင်တာ..။ ဒါပေမဲ့ သိပ် ပျော်စရာကောင်းပြီး သိပ်အသုံးဝင် တာပဲ တဲ့။
ကျမ စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ ပညာရေးဆိုတာ ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ စိန်ခေါ်ချက်တွေ နဲ့ အတူ လက်တွေ့ဘ၀အတွက် တကယ် အသုံးဝင်တယ်လို့ သိသာစေတဲ့ လေ့လာသင်ကြားမှုတွေသာ ဖြစ်ဖို့ လိုတာပဲ.. လို့။
(အမေရိကန် ပညာရေးအကြောင်း ရေးပါဦးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်.. ကျမကိုယ်တိုင်လည်း အမေရိကန်ပညာရေးကို သိပ်နားမလည်တာကြောင့် ကိုယ်တွေ့တွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သိသလို ခံစားရသလို ရေးလိုက်ပါတယ်)